DAAWO:- Booliska Oo Digniino soo saaray iyo Cabsi kajirta Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ahmed weheliye Gaashaan 3 April 2019 3 April 2019
Taliye ku xigeenka ciidanka Booliska Gen Zakia ayaa sheegtay in Magaalada Muqisho uu ku jiro gaari nuuciisu yahay Barado , laguna soo raray waxyaabaha qarxa sidaas darteed shacabka looga baahanyahay in ay feel jignaadaan.
Waxeey Taliyaha Fartay in la yareeyo Scodka Dadkana ay meelaha Leeyskugu tago Buuxiyaan.
Cabsi iyo khataro amni oo baaxad leh ayaa ka jirta Caasimada Ciidamadana waxeey wadaan Howlgalo lagu xaqiijinayo.
Wasaarada amniga gudaha Somalia ayaa soo saartay Digniinaha Waxeeynta Ciidanka booliska Gilisay heegan .
Qoraalkasoo baxay Taliska Booliska Federralka ayaa lagu sheegay In amniga Yahay Baahi Bulshada dhan ay qabto loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo.